स्मार्टफोन किन्दा यी कुरामा ध्यान दिनुहोस् ! – Click Khabar
स्मार्टफोन किन्दा यी कुरामा ध्यान दिनुहोस् !
२०७७, १६ मंसिर मंगलवार0
यति गरिसकेपछि तपाईंले पक्कै पनि २÷४ वटा स्मार्टफोनको छनौट गर्नुहेनेछ । त्यसपछि नजिकैको मोबाइल पसलमा गएर पनि त्यसबारे थप बुझ्न सक्नुहुनेछ । गुगलमा हेरेर तपाईंलाई कन्फिडेन्स बढ्यो भने विभिन्न अनलाइन प्लेटफर्ममा गएर पनि अर्डर दिनसक्नुहुनेछ । अनलाइनमा अर्डर गर्नुभयो भने तपाईंको घरमै स्मार्टफोन आइपुग्छ ।
त्यसका लागि क्यामेराको मेगापिक्सेल, एपर्चर, डुअल लेन्सजस्ता फिचरमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । एजेन्सी
केकी दुलही हुँदा
प्रतिलिपि अधिकार सुनिश्चित
२०७७, २ जेष्ठ शुक्रबार0
किसानलाई दुध दुहुने र घाँस काट्ने मेसिन हस्तान्तरण
२०७८, १३ श्रावण बुधबार0
बन्दीपुरको विकासका लागि बीस वर्षे गुरुयोजना
२०७८, १३ बैशाख सोमबार0